SIDA LOO DOORTO MASHIINKA SAXDA AH SI LOO XOQDO SILSILADAHA SILSILADAHA - MISHIINADA GAARKA AH
Mashiinka shinbiraha shinbiraha: mabda'a hawlgalka, noocyada, talada ku saabsan doorashada
Gantaal - Qalabka aan loo isticmaali karin ee geedi socodka qoryaha. Waxaa loo adeegsadaa si loo gooyo dogobka, geedo la gooyo iyo geedo. Qalabka degdega ah ee qaybta sawir ee qalabku wuxuu keenayaa gashan. Si aad u soo celiso qalabka si aad u shaqeyso, u baahan tahay inaad xoqdo silsiladaha. Qalabka ugu waxtar badan ee tani waa mashiinka looxiijyada shinbiraha. Isticmaalkeedu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kordhiso adeegga qalabka adeegsiga, hagaajinta wax qabadka shaqada, badbaadinta waqtiga iyo dadaalka. Si aad u fahamtid sida loo isticmaalo mashiinnada loogu talagalay qashin-qaadka, waa inaad barataa noocyada iyo mabda'a hawlgalka.
Mashiinka shinbiraha shinbiraha: mabda'a asaasiga ah ee qalabka
Mashiinka loogu talagalay silsiladaha silsiladaha farsamada, qaabkeeda, waxay u egtahay sawir goynta kiniisiga ah, kaas oo mashiinka saaran lagu rakibay meeshii laga gooyay qashin jarista. Qalabkani wuxuu ku dhajiyaa mashiinka mashiinka - qaab shidan oo lagu xakamaynayo madaxa iyo madaxa madaxa laga jaro.
Qaybta sawirku waxay ku xiran tahay qaabka taageerada iyada oo loo maro wakhti gaaban, iyo giraangirta wax lagu shubo ayaa si dhakhso ah loo siiyaa ilig kasta. Xaglaha u dhexeeya silsiladda iyo diyaaradda qeeybta ayaa lagu saleynayaa iyadoo ay ku xiran tahay garoonka. Muraayad yar oo ah 3.5 mm qaro ayaa inta badan loo isticmaalaa si loogu xiro links.
Qeybta si ammaan ah ayaa loo dhigaa miiska, kaas oo damaanad qaadaya nabadgelyada iyo sahlanaanta hawlgalka.
Waa muhiim! Dareemku waa inuu ku yaallaa silsiladda, taasina waxay ka dhigaysaa isku-xidh kasta sida ugu macquulsan. Si kasta oo ay wax uga beddeleyso waxtarka ugu yar ee ilig kasta si gooni gooni ah ayaa noloshooda ugu dheereyn doona.
Silsiladda inteeda badani waxay arkeen silsilado yar yar, dhaqaale, waxsoosaar iyo si sahlan loo shaqeeyo.
Noocyada ugu waaweeyn ee mashiinada si loo xoqdo silsiladaha
Marka la eego waxqabadka, dhammaan noocyada mashiinada wax lagu jajabiyo ee silsiladaha ayaa si caadi ah u kala qaybsan xirfadlayaasha iyo hiwaayadda, iyo sida ayadoo la eegayo qiyaasta otomaatiga, si toos ah (koronto) iyo kuwa gacanta.
Mashiinka automatic ah
Qalabka gawaarida ee aaladaha silsiladaha loogu talagalay silsiladaha ayaa loo adeegsadaa siminaarada iyo xarumaha adeegga oo leh shaqo badan. Qaybtu waa mid taagan, waxay u baahan tahay meel shaqo oo weyn waxayna leedahay shaqeyn sarraysa.
Faa'iidada mishiinnada tamarta ahi waa hawlgal ballaaran, taas oo kordhisa waxtarka shaqadooda. Ka mid ah faa'iidooyinka aaladaha noocan oo kale ah waa awooda lagu hagaajiyo xagasha la doonayo ee silsiladda. Qalabka gawaarida leh waxay leeyihiin sifooyinka soo socda:
Faa'iidada ugu weyn ee qalabyada korontada ee loo xoqayo silsiladaha silsiladaha silsiladuhu waxay ku jiraan nidaam-hawleed buuxa. Ka dhexgalka dadka ayaa kaliya ah in la rakibo loona soo jeesto qalabka.
Si aad u shaqeyso si ka fiican, waxaad u baahan tahay inaad ogtahay sida loo xoqdo silsiladda silsiladaha si sax ah gacmahaaga si sax ah.
Dhibaatada qalabkani waa isbeddelada isbeddelka silsiladda sababtoo ah xidhashada degdegga ah. Qaybta sawirku sida caadiga ah waa isbeddelaa kadib dhowr jeer oo hore.
Mashiinnada mashiinka isdabajinta
Qalabka mashiinka mashiinka loogu talagalay xakamaynta silsiladaha silsiladaha ayaa kuu oggolaanaya inaad qabato shaqada qalabka si fiican loo yareeyo. Waxay u kala qaybsan yihiin laba nooc: moobiilka iyo joogtada ah. Haysashada astaamaha farsamooyinka soo socda:
Faa'iidada aan laysku waafaqsaneyn ee qalabka gacanta lagu qaato ayaa ah helitaanka ugu sareeya ee tayada qoritaanka, qiimaha hoose, amniga qalliinka iyo inaan loo baahnayn in lagu xiro il awood ah.
Ma taqaanaa? Magaca foosha "Friendship" ayaa lagu sharfay sanadguuradii 300aad ee isu keenista Ruushka iyo Ukraine ee 1954.
Faa'iidooyinka mishiinka ee loogu talagalay hagidda mashiinka silsiladaha silsiladaha waxaa ka mid ah shaqo-helidda geeddi-socodka, baahida loo qabo in la helo xirfad ku shaqeynta, iyo waqti badan oo lagu qaato geeddi-socodka. Si aad u isticmaasho unugyada buugga, waa lagama maarmaan in la ogaado xagal fiican, iyo sidoo kale heerka xajinta sawirta iyo haysashada xirfad ay ku duuban yihiin isku xirnaanta hawo cadaadis leh.
Qibrad u leh qalabkan, waxaa suurtagal ah in la gaaro hannaan aad u sarreeya oo ah sawirka sawirka.
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso mashiinka loogu talagalay hagaajinta mashiinka, fadlan ogow in faylasha aan lagu dari Karin baakadeeda. Cabbirka faylka ayaa ku xiran nooca silsiladda.
Sida loo doorto mishiinka saxda ah ee lagu xiro silsiladaha silsiladaha, shuruudaha xulashada
Mid ka mid ah shuruudaha lagu dooranayo mashiinka dhuxusha ee saxda ah waa kharashkiisa. Si kastaba ha ahaatee, tusaha ugu muhiimsan marka la dooranayo qalab waa astaamaha farsamada asaasiga ah, sida:
dhexdhexaadinta weelka dhejiska;
Ma taqaanaa? Nidaamka ugu horreeya ee xirmadda ayaa la soo saaray 1918 oo ku taal Maraykanka (California) oo ku salaysan makiinadda badda.
Xawaaraha shaqada ee mashiinka xargaha ayaa ku xiran xawaaraha. Qeybta xawaarida ugu fiican ayaa aad u ballaaran - laga bilaabo 3000 ilaa 7500 rogaal celin daqiiqadii.
Sida caadiga ah, waxaa lagu talinayaa in la doorto xawaaraha wareega ee la oggol yahay marka uu iibsanayo mashiinka jajabinta guriga. Laakiin marka la eego qiyaasta ballaaran ama isticmaalka qalabka maalinlaha ah, waxaad u baahan tahay inaad joojiso cutubka degdegga ah.
Dhexdhexaadinta weelka dhejinta
Doorashada dhexrooraha wareegga ayaa sidoo kale ku xiran wershada dalbashada qalabka jajaban. Dhexdhexaad xaafadeed oo ah 400 mm ayaa sida caadiga ah helaa codsiga shirkadaha dhismaha. Isticmaalka waxtarka ee cutubka leh dhexdhexaadinta mashiinka saqafka ah ee 110 mm waa suurtogal, tusaale ahaan, siminaaro yar yar ama nolol maalmeedka.
Dadka daryeesha goobta, waxaad u baahan tahay inaad wax dheeraad ah ka ogaato qalabka u adeega, tusaale ahaan, waxa ugu fiican ee gaasku u isticmaali karo, sida loo isticmaalo fargeetada ama waxa loo yaqaan 'adaptor' for the fridge.
Mishiinka wax lagu qoro waxaa loo tixgeliyaa qalab awood leh, oo aan ka badnayn 220 watti. Awoodda tamarta ayaa saameynaysa nolosha unugta, waxtarkeeda, iyo, dabcan, nooca mashiinka sharxaya inuu doorto guriga iyo kan shirkad weyn. Wixii baahi ah ee gudaha, korontadu waa inaysan ka badnayn 200 W, waayo adeegso xirfadeed - laga bilaabo 500 W. Isticmaalka qalabka joogtada ah, awooddiisa waa inay ahaataa mid aad u sareeya.
Buuxinta iyo sifooyin dheeraad ah
Joogitaanka wax kasta oo dheeraad ah marka aad dooranaysid mishiinka mashiinka si aad u tirtirto silsiladaha waxay hagaajineysaa tayada wax-qabadka jarida, waxay kordhisaa xawaaraha qashinka iyo nolosha adeegga cutubka. Tilmaamo dheeraad ah waxaa ka mid noqon kara:
leexashada madaxa madaxa iyo jigga;
shaashadda ilaalinta dhalada;
isku-dhejinta gawaarida si toos ah iyo wixii la mid ah.
Dhammaan ballaadhinta qalabka, qiimaha sare ayay u tahay, siday u kala horreeyaan.
Ma taqaanaa? Waa markii ugu horeysay ee loo xirxiray wargeyska Stihl 1950.
Waa maxay xulashada mashiinka loogu talagalay xakamaynta shinbiraha si ka fiican, qof kastaa wuxuu go'aaminayaa shakhsiyan, iyadoo ku xiran baahida.
Qaababka ka shaqeynta mashiinka si loo xiro silsiladaha
Nuxurka nidaamka waa in:
loosen qashinka ku xiran xadhigga silsiladda;
samee isku xidhka dhagaxa dhagxaanta;
dejiyee xagal-oogista loo baahan yahay;
si loo qariyo.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sifooyin gaar ah marka la qulqusho ilkaha, si toos ah ula xiriira xulashada qalabka.
Qalabka Nadiifinta Nadiifinta
Si aad u isticmaasho unug gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad meel dhigato, si ammaan ah u xir oo u xir. Marka xigta, waxaad dejisaa awoodda la rabo, waxaad bedeshaa qoto dheer oo aad soo rogtaa badhanka bilowga. Isku duubashada waxaa lagu sameeyaa wheel wheel.
Ka shaqeynta cutubka gawaarida qaadashada wax ka badan laba daqiiqo.
Kaadida suunka mashiinka gacanta waxaa lagu sameeyaa iliga, taas oo ah, ilkaha saxda ah ayaa marka hore laga baaraandego, ka dibna gacanta bidixda.
Waa muhiim! Habka ugu fiican ee loo socodsiiyo kaashka ilkaha jarjarida leh mashiinka gacanta oo loogu talagalay xakamaynta silsiladaha silsiladaha waa in la qaato iliga leysku xiro sida template oo u hagaajiyo walxaha haray ee cabbirka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si siman u qaybisid culeyska dhammaanba shaqeynta sawirka inta lagu jiro hawlgalkeeda waxayna ka hortagi doontaa jebinta xiriirrada daciifka ah.
Qoto dheer oo qadhaadh ah ayaa yarayn doonta xoogga ilkaha waxayna yareyneysaa nolosha sawir.
Ka dib markii loo baahdo, qalabku waa in lagu nadiifiyaa hawo cadaadis leh iyo cusbada.
Qalabka qalabka gacmeed ayaa laga yaabaa inuu xiiso u yeesho akhrinta ku saabsan sida loo sameeyo qalab yar-yar-yar-yar-yar-yar-yar-yar ama sida loo sameeyo barxadda barafka ee goobtaada.
Isticmaalka habka loo yaqaan "nadiifinta habka loo yaqaan", waxaad ku gaari kartaa saxsanaanta shaqada, laakin waa inaad waqti badan ku qaadato dadaalkaas.
Marka la eego aqoonta, xirfadaha iyo helitaanka qalabyada, waxaad samayn kartaa doorasho ku habboon mashiinka si toos ah ama manjada gacanta. Kaliya waqtigaa oo aad ku hayso qalabka, waxaad si joogto ah u haysan kartaa xidhidhada xaaladaha shaqada.